Welcome to Lannthit Journal - လမ်းသစ် ဂျာနယ်: ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကြော်ငြာကဏ္ဍ (၅-၁၁)
personal, social » ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကြော်ငြာကဏ္ဍ (၅-၁၁)
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကြော်ငြာကဏ္ဍ (၅-၁၁)
Posted by လမ်းသစ် on Saturday, June 11, 2011 in personal, social |0comments
လမ်းသစ်ဂျာနယ် အမှတ်စဉ် (၅-၁၁) ၂၀၁၀ ဇွန်လဆန်း မှ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကြော်ငြာကဏ္ဍ
ကျွန်တော်သည် မလေးရှားကို ရောက်တာ လပိုင်းပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ပျောက်နေသည့် ညီငယ်လေးနဲ့
သူငယ်ချင်း ဇော်ဦးကို အဆက်အသွယ်ရချင်ပါသည်။ ညီလေးသည် မိသားစုများနှင့် အဆက်အသွယ်
မရသည်မှာ ၅ နှစ်ကျော်လောက် ရှိသွားပါပြီ။ သူ့စိတ်နဲ့မေမေလည်း ဆုံးသွားပါပြီ။ ယခုတစ်ဖန်
ဖေဖေလည်း ဆီးအကျိတ်နဲ့ အိပ်ရာထဲလဲနေပါပြီ။ ညီလေးကို တွေ့ချင်တယ်လို့ ခဏခဏ မှာနေပါသည်။
မောင်စွမ်းမင်းခန့် ၀၁၇-၃၄၅၁ ၂၅၄
C.A. Sheimer (M) Sdn. Bhd.
Lot 98, Rawang Intergrate Industrial Park, 48000 Rawang, Selangor, Malaysia.
မျိုးထက်အောင်၊ အမှတ် ၂၄/ခ၊ ဗိုလ်မင်းရောင်လမ်း ၈ ရပ်ကွက် ဇောတိကပန်းခြံလမ်း၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်။ မလေးရှားမှာ ၇ နှစ် ရှိပြီ။ အိမ်ကို ဆက်သွယ်ပါ။ မင်းတို့အိမ်မှာ အားလုံးအဆင်ပြေတယ်။ ဒါပေမယ့် စောနှင်းအေး အသည်းအသန် ဖြစ်နေတယ်။ အမြန်ဆက်သွယ်ပါ။
ခိုင်ဇော်လတ် ၀၀၉၅၉ ၄၉၃၁ ၉၁၀၉ (မြန်မာပြည်ဖုန်း)
စောနှင်းအေး ၀၀၉၅၉ ၇၃၀၉ ၁၈၄၈ (မြန်မာပြည်ဖုန်း)
နိုင်လင်း ၀၁၇-၉၂၂၃ ၉၇၀၊ ရဲလွင်ထွန်း ၀၁၄-၃၂၇၃ ၅၃၈၊ အေးသူ ၀၁၂-၃၈၈၁ ၀၆၄၊ ခင်မောင်ထွန်း ၀၁၇-၆၅၂၄ ၂၈၀၊ သိန်ဇော်မင်း ၀၁၇-၆၈၄၁ ၇၄၁၊ ကျွန်တော့်ထံသို့ ဖုန်းဆက်ပြီး ဆက်သွယ်ကြပါ။
ပုဂံ/ညောင်ဦးမြို့နယ်၊ တောင်ဇင်းအုပ်စု ထနောင်းစုကျေးရွာမှ (အဖ)ဦးစိန်လှ၏သား မောင်ဝေလင်းဖြိုး ရွာမှ မိဘများ စိတ်ပူနေသည်။ အဆက်သွယ်ပြတ်နေသည်မှာ ကြာနေပြီဖြစ်သဖြင့်တွေ့ရှိပါက ကူညီအကြောင်းကြား ပေးပါ။
ခင်မောင်အေး ၀၁၆-၃၆၃၉ ၄၅၄၊ ၀၁၆-၆၉၃၄ ၆၁၄
ခင်ဦးမြို့နယ်၊ သာဝတ္ထိရွာနေ ဒေါ်ကြည်ဆိုင်၏ သားမောင်ဝင်းဇော် မိဘများ စိတ်ပူနေပါသဖြင့် အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ပါရန်။
ကျော်သိင်္ခ ၀၁၆-၃၂၆ ၄၄၉၇၊ ၀၁၄-၃၆၆၇ ၆၂၃
Nissan Suny 130Y, Model 1983, New Himming Belt, Loe- Kajang ရောင်းဈေး - ရင်းဂစ် ၂၆၀၀
အောင်မျိုးအေး ၀၁၂-၃၈၉၄ ၃၈၉၊ ၀၁၇-၃၉၄၈ ၉၇၂
Bandar Deknologi, Kajang.
အလုပ်သမား (အမျိုးသား) အလိုရှိသည်။ ရေသန့်ဗူးစက်ရုံ နီလိုင်း(Nalai)တွင် လုပ်ရမည်။ တစ်နေ့ ရင်းဂစ်-၃၈။
ZS ကားရေဆေးလုပ်ငန်းတွင် အလုပ်သမား အလိုရှိသည်။ (စိတ်ဝင်စားသူများ ဆက်သွယ်နိုင်သည်။)
ကိုမျိုး ၀၁၄-၉၃၈၅ ၀၆၅
ကျွန်တော် မောင်ထွန်းလင်းအောင်၏ ဇနီးဖြစ်သူ မခင်သီတာဆွေ@ဖြူလုံး၊ ပတ်စပို့နံပါတ် (A-021242) ကိုင်ဆောင်ထားသူသည် အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်၍ အိမ်ပေါ်မှ ဆင်းသွားပါသဖြင့် ၄င်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစ္စအ၀၀၀ကို တာဝန်မယူပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
မန္တလေးတိုင်း၊ မြင်ခြံမြို့နယ်၊ ခြေဆေးရွာနေ သူငယ်ချင်း သက်နိုင်ထွန်း@Pangang မင်းနဲ့ရုတ်တရက် အဆက်အသွယ် ပြတ်သွားတော့ အရမ်း စိတ်ပူနေတယ်။ ငါ့ကို ပြန်ဆက်သွယ်ပါ။ ၄င်းကို သိရှိသူများမှ အကူအညီပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
ကိုမျိုး@ပဲခူးသား ၀၁၆-၂၄၄၁ ၆၂၇
ပြွန်တန်ဆာမြို့၊ ညောင်လေးပင်မြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်း။
အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်း ညိမ်းချမ်း@ဝေယံ၏ ၂၅.၅.၂၀၁၁ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သည့် ၂၂ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ အခက်အခဲဟူသမျှ ကျော်လွှားနိုင်၍ ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်ကို အောင်မြင်စွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေဟု ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်။
ဇော်လင်း ၀၁၄-၇၂၁၂ ၀၁၀
Suban Jayar, USJ/212 F Jalan No.29.
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မုံရွာမြို့၊ ကွေ့ကြီးရပ်ကွက်မှ မသူဇာ၏ ယောက်ျား မောင်ဘိုဘိုမင်း မလေးရှားကို ရောက်နေတယ်လို့ ငါ သိရတယ်။ စိုးမင်းနဲ့လည်း တွေ့တယ်။ ငါ ၈ လပိုင်း ပြန်မယ်။ ငါနဲ့အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ပါ။
မောင်မင်းမင်းထွန်း@ကိုရင်ကြီး ၀၁၄-၆၂၇၃ ၄၈၉
Y.Y အင်ဂျင်နီယာ၊ ဘန်တာတက်
(မုံရွာ၊ မင်းကင်းကျောင်းတိုက်၊ သျှမ်းပွဲရုံ)
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မုံရွာမြို့၊ ယင်းမာပင်မြို့နယ်၊ ဗြဟ္မဒတ်ကျေးရွာမှ ကျော်မြင့်သိန်း မလေးရှားမှာ ရှိသေးရင် ကျွန်တော်နှင့် အမြန်ဆုံး ဆက်သွယ်ပါရန်။ (ဦးဇင်းပုံပုံ၏ ယောက်ဖ၊ မမော်မော်၏ အမျိုးသား)
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဂွမြို့နယ်၊ စေတီကွင်း ကျေးရွာနေ ဦးကျော်မောင်+ဒေါ်သန်းသန်းရီတို့၏ သား မောင်ကြည်စိုး အိမ်နှင့် အဆက်အသွယ် မရသည်မှာ နှစ်နှစ်ကျော် ရှိနေသဖြင့် မိဘများ စိတ်ပူနေပါသည်။ မိဘများနှင့် အမြန်ဆုံး ဆက်သွယ်ပါ။ မောင်ကြည်စိုးအား သိရှိသော သူငယ်ချင်းများ ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပေးပါရန်
လေးစားစွာ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ (ဦးဇင်းပုံပုံ၏ ယောက်ဖ၊ မမော်မော်၏ အမျိုးသား)